သနပ်ခါးမေ: February 2014
By **~ မြတ်ကြည်~** 5:06 AM လက်​သည်း ( nail art )
ဒီ လက်သည်းပုံစံလေးကို ဘာ ကရိယာ တန်ဆာပလာမှ မရှိလည်း ဆိုးနိုင်ပါတယ်။ အရင် tutorial တွေမှာ သုံးခဲ့တဲ့ သွားကြားထိုးတံတောင်မလိုပါဘူး။
လွယ်လည်း အရမ်းလွယ်တာမို့ သဘောကျလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
Quarter Fauna က ကိုယ့်ဘာသာ နာမည်ပေးထားတာ :D
အရင်ဆုံးက ထုံးစံ အတိုင်း base coat ဆိုး၊ ပြီးတဲ့ အခါ အောက်ခံအနေနဲ့ အပြာရောင်လေးဆိုးလိုက်ပါတယ်။
ခြောက်တဲ့ အခါ လက်သည်းနီ အနီရောင်လေးနဲ့ ဒေါင်လိုက် တစ်ချက်၊ အလျှားလိုက် တစ်ချက်၊ ကြားမှာ ထောင့်ဖြတ်တစ်ချက် ဆွဲပါ။
ခဏစောင့်၊ ခြောက်တဲ့ အခါ ပန်းနုရောင်လေးနဲ့ အရှေ့ကအတိုင်း stroke ၃ ကြောင်းဆွဲပါမယ်နော်။
အတွင်းဆုံးကိုတော့ အရှေ့ကသုံးခဲ့တဲ့ အနီရောင်လေးနဲ့ နည်းနည်း ထိန်းပြီး တို့လိုက်ပါတယ်။ ခြောက်တဲ့အခါ top coat ထပ်လိုက်ရင် ပန်းပွင့် တစ်စိတ် လက်သည်းလေးရပါပြီ။
မြတ်ကြည် လုပ်တာ သိပ်တောင် မသပ်ရပ်ဘူး။ စာဖတ်သူတွေ မြတ်ကြည်ထက် ပိုဆွဲတတ်ကြမယ်ထင်တယ်။ လုပ်ကြည့်လို့အဆင်မပြေတာများရှိရင် ပြောနိုင်ပါတယ်နော်။
မြတ်ကြည်လုပ်ထားတဲ့ တခြား လက်သည်း tutorial လေးတွေကို ဒီမှာ click ပြီး သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 11:33 PM DIY, မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
ဒီလဆန်း ပိုင်း​လောက်​က မြတ်​ကြည်​ ရဲ့ အခင်​ဆုံး သူငယ်​ချင်းထဲက တစ်​​ယောက်​ မင်္ဂလာ ​ဆောင်​ တယ်​။ သူ့အတွက်​ အမှတ်​တရဖြစ်​​အောင်​ pre-wedding photo shoot တုန်းက လိုက်​ရိုက်​ထားတဲ့ ပုံ ​လေး​တွေနဲ့ ရုပ်​ကြွ ဓာတ်​ပုံစာအုပ်​​လေးလုပ်​ထားတာကို ပြချင်​လို့။ :)
အချိန်​ သိပ်​မရ​တော့ စာမျက်​နှာ ၅ မျက်​နှာ ပဲ လုပ်​ဖြစ်​လိုက်​တယ်​။ ဒါ​တောင်​ အလုပ်​က အားရက်​ မထတမ်း ခါးချိ​အောင်​လုပ်​ထားတာ။
Background wall paper ​လေး​တွေက Internet ကရှာပြီး ​ဒေါင်း၊ print out ထုတ်​၊ ဖြတ်​ကတ်​ညှပ်​​လေး​တွေလုပ်​။
အဖွားအိမ်​က နားက ဓာတ်​ပုံဆိုင်​မှာ sticker စာရွက်​လို့ ​ပြောထုတ်​ရင်​ရတယ်​။ A4 တစ်​ရွက်​မှ ၅၀၀။ ပြီးရင်​ အမာခံ အတွက်​ ကတ်​ထူ​ပေါ်ပြန်​ကပ်​တာ​ပေါ့​နော်​။ ​နောက်​​တော့ လိုသလို ပြန်​​နေရာချတာ။
အဖုံး​လေးကို​တော့ ဖဲကြိုး​လေးနဲ့ ရိုးရိုး​လေးပဲ လုပ်​ပြီး ဖိတ်​စာ အိတ်​​လေးနဲ့ ပြန်​ထည့်ေ​ပးလိုက်​တယ်​။ :)
​ပေးလိုက်​​တော့ သူငယ်​ချင်း​ရော သူ့ အမျိုးသား​ရော ကြိုက်​ကြတယ်​။ ဧည့်​ခန်းမှာထားလို့ ​တော့ မှာလိုက်​တာပဲ။ :D
ဒါ​လေးက သူ့မင်္ဂလာ​ဆောင်​ ၀တ်​သွားတာ။ ချုပ်​ထားတာ ၂ နှစ်​​လောက်​​တော့ရှိပြီ။ မယုံးယုံး ချုပ်​​ပေးတာပါပဲ။ နည်းနည်း ရိုးတယ်​။ ချိတ်​က ​ရွှေပြည်​တန်​က။
မြတ်​ကြည်​ ခရီးလွန်​​နေလို့ ပို့စ်​အသစ်​ မထွက်​နိုင်​ ဖြစ်​​နေတယ်​။ ဒါ​လေးကို ပို့စ်​ ကျဲ​နေချိန်​ မပျင်းရ​အောင်​တင်​လိုက်​တာ။ ​နောက်​ ၂ ရက်​​လောက်​​နေရင်​ ထပ်​​တွေ့ကြမယ်​​နော်​။
သာယာ​ပျော်​ရွှင်​ဖွယ်​ ​နေ့​လေးတစ်​ရက်​ ဖြစ်​ပါ​စေရှင်​။
By **~ မြတ်ကြည်~** 10:12 AM မျက်​နှာ အလှပြင်​ makeup
မျက်ရစ်မပေါ်တဲ့သူတွေ အတွက် မျက်ရစ် ထင်းထင်းလေးဖြစ်အောင် ခိုးချယ်ထားတာပါ။ ခြယ်နည်းကတော့ ပုံလေးကြည့်တာနဲ့ ရှင်းပြဖို့တောင် မလိုဘူးထင်ပါတယ်နော်
အရောင်ရှဲဒိုးကို မျက်ခွံမှာခြယ်၊ အပေါ်ကနေ အနက်ရောင် gel eyeliner လေးကို မျက်ရစ်နေရာအတိုင်း လိုက်ဆွဲပြီး အစွန်းဘက်မှာ တြိဂံပုံလေးဖော်လိုက်ပါနော်။ ရှိရင်းမျက်ရစ်လေးက ဒီလိုခြယ်လိုက်ရင် ပိုပြီး ထင်းထွက်လာမှာပါ။ စမ်းကြည့်ကြပါနော်။
ပို့စ်အသစ်မတင်ဖြစ်သေးတာနဲ့ ဖဘ စာမျက်နှာမှာ အရင်အပတ်က တင်ထားတာလေးကို ပို့စ်အနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရ မလေးအောင် blog template လေး တစ်မျိုးပြောင်းထားပါတယ်။ အဆင်မပြေတာရှိလည်းပြောနိုင်ပါတယ်နော်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 6:30 PM အာဒမ်နဲ့ပတ်သက်၍
ပျိုမေတို့ရေ၊ ယောက်ျားလေးတွေ မိန်းကလေးတွေကို တွဲတာ အကြောင်းပြချက် ၂ခုပဲရှိပါတယ်။ အပျော်တွဲတာ (ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျောရရုံ ကြံချင်တာမျိုး) နဲ့ တကယ်ချစ်ပြီး တသက်စာအတွက် သူ့ဘေးမှာရှိစေချင်တာ။ ကိုယ်တွဲနေတဲ့သူက ကိုယ့်ကို သူ့ဘဝတစ်သက်စာ အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့သူ (keeper) လား? sleeper ဆိုရင်တော့ အစကတည်းက ရှောင်လို့ရတာပေါ့။
တကယ်အတည်ကိုယ့်ကို အချစ်​စစ်​နဲ့ ချစ်တဲ့သူမျိုးက-
သူ့မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကို ဒါ ကျွန်တော့် ကောင်မလေးလို့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ ဝန်မလေးဘူး။
သူတို့ မကြိုက်တဲ့ အစားအစာဖြစ်ပါစေဦးတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကြိုက်ရင် အနည်းဆုံး ကြိုက်လာအောင် လိုက်မြည်းစားကြတယ်။
သူများတွေရှေ့မှာ အကဲပိုမပြတတ်ဘူး။ (သူကိုယ့်ကို အရမ်းချစ်တာသူများတွေ သိဖို့ပြဖို့မလိုဘူး သဘောထားကြတယ်)
ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားသလို၊ ကိုယ့် အသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်း respect ပေးတတ်တယ်။ ကိုယ့်မိဘ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တည့်အောင် လိုက်ပေါင်းပေးတယ်။
ကိုယ့်အပေါ် ရိုးသားမှူရှိတယ်။ ဒါပြောလိုက်လို့ ရန်ဖြစ်မလားဆိုပြီး မပြောပဲ မထားတတ်ဘူး။
ကိုယ့်ကို အံ့အားသင့်စေလိမ့်မယ်။ ပန်းတို့ ချောကလက်တို့ နဲ့တင် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်နဲ့တွဲပြီးနောက်ပိုင်း သူ့ကိုယ်သူ အရင်ကထက် ကောင်းတဲ့
ယောက်ျားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပေးလိမ့်မယ်။
သူ ကိုယ့်ကို ဈေးကြီးတဲ့ အရာတွေ ပေးစရာ မလိုပဲ ကိုယ့်ကို ပြုံး ပျော် အောင် လုပ်နိုင်တယ်။
Physical relationship အတူအိပ်ခြင်း မအိပ်ခြင်းက သူ ကိုယ် အပေါ်ထားတဲ့ ခံစားချက် အပေါ်သက်ရောက်မှူမရှိဘူး။
နားလည်မှူ အပြည့်ထားပေးတယ်။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့ အခါ သူစိတ်များဆိုးမလား၊ သဝန်များတိုမလား စိတ်မထင့်ပဲ စိတ်သန့်သန့်နဲ့ လုပ်လို့ရတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို စနောက်ရင် နောက်မယ်၊ ဒါပေမယ့် လူအရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ မလှောင်ဘူး။
ကိုယ့် အမေ သူ့ကို အမှတ်တွေ ပေးနေလိမ့်မယ်။
ကိုယ့် အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တစ်ဖက်တလမ်းကနေ ကူညီဖေးမ ပေးမယ်။
နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာလျှို့ဝှက်ချက်မှ မထားဘူး။
အလှပြင်မထားလည်း ဂရုစိုက်စရာ မလိုပဲ သူနဲ့တွေ့လို့ရတယ်။
ဒါ​လေးက Thought Catalog က Chelsea Regan ​ရေးတဲ့ Signs you are datingakeeper ဆိုတဲ့ ​ဆောင်းပါး​လေးကို ​ကောက်​နှုတ်​ တင်​ပြ​ပေးတာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
Keeper လို ချစ်​သူမျိုး ပိုင်​ဆိုင်​ထားရင်​​တော့ လက်​ရှိ ချစ်​သူကို ဒီထက်​ပိုပြီး တန်​ဖိုးထား​ပေးလိုက်​ပါ​နော်​။ အခု​ခေတ်​မှာ ​ဒီလို လူမျိုး ရှားတယ်​ မဟုတ်​လား ။
Please visit my facebook page http://www.facebook.com/thanakharmay for more updates.
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:00 AM လက်​သည်း ( nail art )
လွယ်​လွယ်​ကူကူ ရာသီစာ​လေး အေ​နေနဲ့Valentine day အတွက် စိတ်​ကူးပြီး လုပ်​ထားတဲ့ လက်​သည်း design ​လေးပါ။
လိုအပ်​တာ​လေး​တွေက လက်​သည်းနီ ၃/ ၄ ​ရောင်​ရယ်​၊ တိပ်​ရယ်​၊ သွားကြားထိုးတံ ရယ်​ပါ။
အရင်​ဆုံး လက်​သည်းကို ​အောက်​ခံ ​အ​ရောင်​​လေး​တွေဆိုးပြီး အ​ခြောက်​ခံထားပါတယ်​။ မြတ်​ကြည်​က​တော့ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်​​အောင် လက်​သူကြွယ်​ တစ်​​ချောင်းကို အ​ရောင်​မတူတာ​လေး ​ရွေးဆိုး ထားပါတယ်​။
တိပ်ကို အလည်က ခေါက်၊ အသည်းပုံ အပေါက်လေးဖြစ်အောင်ညှပ်ပြီး အခုလို လက်သည်းပေါ်ကိုကပ်လိုက်ပါတယ်။
သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ လက်သည်းနီ ၂ရောင်၊ ၃ ရောင်ကို သင့်တော်သလို အသည်းပုံလေး အတွင်းမှာ အစက်လေးတွေ လိုက်ချပါတယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက် ခြောက်တာစောင့်ပြီးခွါလိုက်ရင် mosiac အသည်းပုံလေး ရသွားပါပြီ။
Valentine day ဆိုပေမယ့် ချစ်သူမရှိတဲ့သူတွေလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်နော်။ ချစ်သူများနေ့ ချစ်သူကို ဘာပေးမယ် စိတ်ကူးနေရင်တော့ ဒီအောက်က ဆောင်းပါးလေးမှာ ရေးပေးထားပါတယ်။ အချိန်ရရင် ဖတ်သွားပါဦး။ :)
Diet Plan : Lose 10 lbs in7days ( ၇ ရက်အတွင်း ၁၀ ပေါင်ချမယ် )
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:21 PM အစားစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း (Diet and Exercise)
၇ ရက်အတွင်း ၁၀ ပေါင်ကျစေမယ့် pinterest က ၇ ရက်စာ diet plan လေးပါ။
ဝိတ်လျှော့လိုသူ စာဖတ်သူများအတွက် ဘာသာ ရသလောက်လေး ပြန်ပေးထားပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးကလွဲလို့ ကြိုက်တဲ့အသီးအနှံစားလို့ရပါတယ်။ ကယ်လိုရီအနည်းဆုံးပါတာကတော့ ဖရဲသီးလို cantaloupe လို အသီးမျိုးတွေပါ။ အဲလိုမျိုးအသီး များများစားလေ ဝိတ်ပိုကျလေပါပဲ။
Day2(Veggie Day)
အသီးအရွက်ကြိုက်သလောက်စားပါ။ အစိမ်းလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဒါပေမယ့် စေးတဲ့ အသီးအနှံတွေမပါပါဘူး။ ဥပမာ။ ။ပဲ၊ ပြောင်း။ ဒီနေ့ရဲ့အားသာချက်က ထောပတ်နဲ့ဖုတ်ထားတဲ့ အာလူး ၁ လုံးစားလို့ရပါတယ်။
Day3(Fruit and Veggies)
ပထမနဲ့ ဒုတိယ ရက်အတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အာလူးတော့မပါပါဘူး။
Day4( Bananas and Yogurt)
ငှက်ပျော်သီးကို ၈ လုံးအထိ၊ အဆီထုတ်ထားတဲ့ နွားနို့ / ဒိန်ချဉ်ကို ၈ခွက်အထိသောက်လို့ရပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးမှာ ကစီဓာတ်နဲ့ ကယ်လိုရီတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေ့က ခန္ဒာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကယ်စီယမ်၊ ပရိုတင်း ဓာတ်တွေကိုဖြည့်ပေးမှာဖြစ်လို့ အချိုစားချင်စိတ်ကို လျှော့ချပေးပါလိမ့်မယ်
Day5( Fowl and tomatoes)
ကြက်သား၊ ကြက်ဆင်သားနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး ၆ လုံးထိ ကို စားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရမ်းချဉ်သီး တစ်လုံးစားပြီးတိုင်း ကိုယ်မှာရှိတဲ့ ယူရစ် အက်ဆစ်ကို ဆေးချဖို့ ရေ တစ်ခွက်သောက်ပေးပါ။
Day6(Fowl and veggies)
အရှေ့ရက်က ကြက်သား ရယ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စာလို့ရပါတယ်။ အာလူးတော့မပါပါဘူး။
Day7(Miracle soup)
လှီးပြီးသား ကြက်သွန်နီ ၂လုံးကနေ ၃လုံး၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ငရုတ်ပွ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ( blender ထဲချေပါ)၊ ရေ ၄ ခွက်မှ ၆ခွက်ထည့် ၁၀မိနစ်လောက်တည်ပြီး ဟင်းခတ်မှုန့်ထည့် နူးသည်အထိတည်ပြီး ဟင်းရည် လုပ်ပြီး သောက်ပါ
ပေါင် တကယ် ကျတယ်လို့ပြောတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် risk ကိုယ်ယူလို့ပြောထားတော့ နည်းနည်းချင့်ချိန်ပေါ့နော်။ မြတ်ကြည်လည်း ဝက်ဖြစ်နေလို့ ( ဟိုမှာထက် ၁၅ ပေါင်လောက်တက်လာတယ်) ဝိတ်လျှော့ရဦးမယ်။
ကြီးကြီးကြည့်ချင်ရင် ပုံကို click နှိပ်ပါနော်။
Find us on facebook for upcoming posts http://www.facebook.com/thanakharmay